Tsy ho lavon’ny LP sy ny fisamborana izahay ankolafy Ravalomanana! – MyDago.com aime Madagascar
Niavaka ny hetsika nataon’ny ankolafy telo androany tetsy amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka.Saika nahatonga solon-tena avokoa ny ankolafy tsirairay avy.
Ny Printsy Elakovelo avy amin’ny ankolafy Ratsiraka dia nilaza fa tsy manaiky hatramin’izay io tetezamita io ny amiraly Didier Ratsiraka sy ny mpiara-dia aminy ary tsy hiditra anatin’io tetezamita peta-toko io mihitsy. Mila matotra ny fanoavana politika hoy izy ary tsy azo atao ny mandainga amin’ny anaran’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ny omaly ihany no androany koa raha mbola tsy manaiky i Zafy, Ratsiraka sy Ravalomanana izay miaraka sy mamim-bahoaka dia nofinofy sy lainga ny fankatoavana iraisam-pirenena hoy Elakovelo. Rehefa tsy mahavita mitondra ny firenena ny FAT dia tokony hametra-pialana hoy izy fa hain’ ny ankolafy telo sy ny hafa ny mitondra an’io.
Nitondra vaovao avy any amin’ny faritr’i Toliara i Manoela, ireto toko be telo ireto no manahirana an’i Camille Vital any Toliara ary navoaka tsy nisy taratasy ireo gadra politika hoy izy.Momba ny fitazonana ny Sekretera Jeneralin’ny TIM any amin’ny BC kosa indray dia nazava ny hafany : “Tsy mpanao baomba ary manana ny hajany i Mamy Rakotoarivelo koa avoahay tsy misy hatak’andro”. Nanambara sy nanentana ny olona ho eny Anosy ihany koa moa izy amin’ny mety ho fampiakarana ity raharaha ity eny amin’ny fampanoavana rahampitso.
Tonga mivantana teo an-kianja ihany koa tamin’ity androany ityi Sazolahy Tsianiha, mpitarika ny toko be telo any Toliara, iray tamin’ireo nogadraina. Ny fisamborana ny olona tsy mitovy firehana politika amin’ny mpitondra dia tsy hery fa fahalemen’ny fitondrana hoy izy. Efa nanao velirano ny ankolafy telo sy ny Monima fa handroso ka ‘ndao hoy izy.
Rakotomandimby Zafilahy kosa dia nanambara fa mila esorina ny FAT fa mavanin-doza ary mbola manohy izany hatrany. Mbola tsy maintsy mandalo sehatra maro ny “feuille de route” fa tsy hazakazaka arahin-tosika toy ireny hoy izy. Ny frantsay manosika aza miverin-dalana ka inona no hanohana sy handehana any ? Hihinana sy handroba koa ve ? Tsy hisy intsony izany ka raiso ny andraikitra, ndao hantambatra ny hery ! hoyihany izy. Tsy hanaiky zavatra tsy hahasoa an’i Madagasikara Ravalomanana hoy hatrany ity depiotén’i Vavatenina ity.
Manandafy Rakotonirina indray dia nampatsiahy ny tantara, i Joyandet izay efa nahilika no niteny fa aleo i Andry Rajoelina sy Ravalomanana ihany no hidinika fa ailika i Zafy sy Ratsiraka fa i Ravalomanana kosa tsy nanaiky izany. Ankehitriny dia manohy ny “feuille de route” ny ankolafy telo any Afrika ary songonany ny rango-pohy tany Ivato.
Olona 4 no notendren’ny filoha Ravalomanana hitantana ny ankolafy hoy izy, ny iray any ivelany, ny iray lasa any Ambohitsirohitra, ny iray mety higadra ka izaho irery izany sisa no eto ankehitriny, izany no hitongavako eto hilaza fa tsy mandao anareo aho ary mbola mijoro ny ankolafy Ravalomanana. Tsy ho lavon’ny LP sy ny fisamborana izahay hoy izy. Ho avy ny bekintana, frantsay sy ny anglisy hamotika an’i Kadhafi hoy ny lehiben’ny “Mafana”.
Jereo eto koa, Photos Magro 18/03/2011 (1/4) miisa 10.
Jereo eto koa, Photos Magro 18/03/2011 (2/4) miisa 10.
Jereo eto koa, Photos Magro 18/03/2011 (3/4) miisa 10.
Jereo eto koa, Photos Magro 18/03/2011 (4/4) miisa 09.
Tsy mivadi-belirano amin’ny filoha Ravalomanana izahay hoy Fetison !
Matahotra ny ankolafy telo ny FAT !
Auteur Solo RazafyPublié le 18 mars 2011 19 mars 2011 Catégories Magro, Malagasy, Négos, Politique
Précédent Article précédent : Video – Printsy Elakovelo – Magro 18/03/2011
Suivant Article suivant : Video – Dezy, FRDL, Magro 18/03/2011